I-aluminium enesiciko seplastikhi eneengxowa zefoyile engenanto inokwenziwa ngokutya okungafunwayo Ukuncwina
Imveliso ihlolwe ngemigangatho ye-GB kunye ne-ASTM, kwaye imveliso iyahlangabezana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo (ingxelo yovavanyo yomntu wesithathu inokubonelelwa). Iimveliso zidibana nemilinganiselo engqongqo yokukhusela indalo kwi-European Union nakuMntla Melika. Ngokweemfuno, umbandela unokwenziwa ube ngamanqanaba amathathu okanye amane, kwaye iimveliso ezinemveliso eyahlukeneyo kunye nobukhulu zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno, kwaye umphezulu ungashicilelwa kuwo nawuphi na umbala.
Indawo yokugcina ngokubanzi: ubushushu ≤ 38 ≤, ukufuma ≤ 90%. Umda wokutywina yi-10mm ukuhlangabezana neemfuno zentengiso.
1.Zilungele zonke iintlobo zeebhodi zesekethe, iimveliso zekhompyuter, oomatshini bokuchaneka ngokuchanekileyo, izinto ezisetyenziswayo, iimveliso zeshishini, njl.
Umz: ibhodi yePC, i-IC edityanisiweyo yesekethe, izinto ze-elektroniki, i-chip ye-SMT yamashishini ahlukeneyo e-LED, ukupakishwa kwesibane, izixhobo zentsimbi ezichanekileyo, iindawo zokupakisha ezizenzekelayo, njl.
Ukupakishwa kwe-2 yokutya: irayisi, iimveliso zenyama, intlanzi eyomileyo, iimveliso zasemanzini, inyama ephilisiweyo, idada eyosiweyo, ukutya okungumkhenkce, ham, ukutya okuphekiweyo, isinongo, njl.
Iimpawu (indlela yovavanyo) Ixabiso eliphakathi
Ubukhulu Iyonke 0.01mm ~ 0.02mm
Tensile Strength / GB / T 1040.3-2006) 50MPA
Ukudibanisa ngexesha lekhefu （GB / T 1040.3-2006) ngama-80%
Iimeko uphawu Ubushushu
Ubushushu 150 ℃
Ixesha 3 ~ 5seconds
Impedance yomphezulu <10 的 1010
Umphunga wamanzi uhluziwe I-ASTM F1249-2006) 1.023g （m3.d）
Ukuhanjiswa kweoksijini （I-ASTM D3985-2005) 0.075cm3（Stp） / (m2.d）
Egqithileyo 3 G 5 g 10 g 100 g silica gel ngaphaya granule desiccant
Okulandelayo: Umenzi wekhadi lokufuma
Ukupakisha i-Bubble Bag, Ilaphu leBlue Static Bubble, Ingubo ebomvu yeBhola, Umenzi weMaski, Umatshini omnye wokuTsala uMatshini omnye, Umatshini weMask yobuso,